I-red red redemption 2 iqabane lokusebenza elizakwaziswa ngo-Okthobha 26
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Red Dead Redemption 2 iqabane le-app liya kuqaliswa ngo-Oktobha 26
I-Red Dead Redemption 2 iqabane le-app liya kuqaliswa ngo-Oktobha 26
I-Red Dead Redemption 2 yenye yezona zinto zilindelweyo kulo nyaka, kodwa ukuba awunayo i-PlayStation 4 okanye i-Xbox One, awuzukuyidlala (uxolo, i-PC gamers). Umphuhlisi weMidlalo yeRockstar uxele nje ukuba umdlalo wabo ozayo uza kufumana i- Iqabane lokusebenza leselula kwangolu suku lunye iRed Dead Redemption 2 iya kuphehlelelwa, nge-26 ka-Okthobha.
Ukuhlawulelwa okubomvu okubomvu 2 Iqabane lokusebenza iya kufumaneka kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS kwaye iya kubonelela abadlali ngolwazi lwexesha langempela njengoko bedlala umdlalo kwiikhonsoli zabo.
Imephu yomdlalo iya kufikeleleka ngaphakathi kwi-app yeselfowuni, apho abadlali baya kuba nakho ukuseta i-waypoints okanye baphawule iindawo ezinomdla, bencedisa ukuphononongwa kwabo kwaye bafumane kwihlabathi liphela leRed Red Redemption 2.
Ukongeza, iapp iyakubonisa abadlali ezona nkcukacha ziphambili kunye nezibalo zexesha lokwenyani, ezibavumela ukuba bayisuse ngokupheleleyo i-HUD yomdlalo weTV kwiTV ukuze bacwiliswe ngcono. Eminye imiba yomdlalo iya kufumaneka kwi-app yeselfowuni efana nejenali kunye nencwadana yemigaqo epheleleyo yedijithali.
umthombo: Imidlalo yeRockstar
isamsung galaxy bukela umnyama ngolwesiHlanu ka-2018
uthotho lweewadi zeapile 6 titanium
Idili: Kuvulwe i-Samsung Galaxy S7 kunye nomda we-S7 ngoku ngexabiso eliphantsi kwi-Best Buy
I-AT & T inikezela ngeBOGO kwisivumelwano kwi-iPhone 7 okanye kwi-iPad yasimahla xa utshintshela kwi-DirecTV
Imikhombandlela kwindlela yokufaka ngesandla iAdobe Flash Player kwisixhobo sakho se-Android
Ungawenza njani uPhendlo lweMifanekiso kwi-iPhone nakwi-Android
Isamsung i-Samsung Galaxy J7 Star iza kungekudala kwi-T-Mobile, enokubakho phantsi kwe- $ 300
Uyifaka njani i-IntelliJ kwiMac OS usebenzisa iBrew
I-120Hz vs 60Hz isiphumo kubomi bebhetri ngokuthelekiswa: I-Galaxy S20 Ultra vs S20 Plus vs S20
I-Apple iPhone XS vs Apple iPhone X